Ngaba i-oyster peptides inokuphucula ukusebenza kwamadoda?
1. Amagqabantshintshi e-oyster
2. Yintoni i-Oyster Peptide?
3. Imisebenzi ye-Oyster Peptide kunye neziBonelelo
4. Zeziphi izibonelelo ze-Oyster Peptide xa uthelekiswa nezinye iimveliso zokuphucula zesini?
5. Ungayithatha njani i-Oyster peptide powder? Idosi ye-oyster peptide?
6. Iziphumo zeSiqithi seOyster Peptide?
7. Isicelo se-Oyster Peptide Powder?
8. Amagama okugqibela
OysterIsilwanyana saselwandle esithandwayo ngumthombo odumileyo womgubo wokukhupha ioyster, ibiyinto ethandwayo kubantu abaninzi amashumi eminyaka. Ungayitya ikrwada okanye iphekiwe. Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo, inyama yeembatyisi iya kunika umzimba wakho uluhlu lwezondlo. Izondlo zibandakanya iprotein, amafutha asempilweni, iiminerali kunye neevithamini.
Enye into edibanisa le nyama kukuba iphantsi kwiikhalori.
Zininzi iimveliso ezinokukhutshwa kwinyama ye-oyster, i-oyster peptide ibe yenye yazo. Kolu hlaziyo, siza kugxila kwi-oyster bioactive peptides kunye nefuthe lazo ekusebenzeni kwamadoda, phakathi kwezinye izibonelelo ezinokubakho.
Yintoni i-Oyster Peptide?
I-Oyster peptide sisongezelelo sendalo esivela kwiprotein yinyama ye-biotechnology ngamanyathelo amaninzi. Ipeptide ityebile nge zinc, calcium, taurine, kunye neevithamini A, B1, B2, B5, C, D kunye no-E. Inoluhlu lwezibonelelo zezempilo phakathi kwabantu, ngakumbi amadoda aneengxaki zempilo yezesondo.
Ii-Oyster bioactive peptides zine-potency yebhayoloji ephezulu ngokuthelekiswa nezinye iimveliso zeoyster Ngaphandle koko, i-oyster peptide inomsebenzi obaluleke kakhulu womzimba. Ngcono nangoku, ngokungafani neemveliso zeembatyisi eziqhelekileyo, oyster peptide powder Unencasa emnandi kwaye akanalo ivumba leentlanzi.
Imisebenzi ye-Oyster Peptide kunye neziBonelelo
I-Oyster peptide inemisebenzi kunye nezibonelelo ezilandelayo:
I-taurine enikezwe yi-oyster peptide inokuphucula ukugcinwa kwe-bile emntwini. Ukongeza, i-oyster derivative inokuthintela ukuqokelelwa kweqiniso yokungathathi hlangothi okanye ukuphelisa amafutha aqokelelweyo esibindini. Zombini izinto ezisebenzayo zixhasa isibindi emsebenzini waso wokukhupha inkqubela phambili.
Ukuphucula ukusebenza ngokwesondo
I-oyster peptide ityebile kwi-arginine, kunye nezinto ze-Zinc, zombini ezi zibalulekile kwimpilo yezesondo yomntu. Inceda ekuvelisweni kweehomoni zesondo, kubandakanya iprogesterone, testosterone kunye ne-estrogen.
Xa uthatha i-oyster peptide powder rhoqo, uya kuqaphela ukuba uya kuba mhle ngakumbi okanye umhle imihla ngemihla. Kungenxa yokuba ibonelela umzimba wakho ngezakha-mzimba ezikhuthaza imalabolism kulusu lwakho, ukuwenza ubukeke usempilweni kwaye uhonjelwe kakuhle amanzi.
Ngaphandle koko, le powder yendalo inezinto ezikhuthaza ukubola kwe-melanin yolusu. Ngenxa yoko, ithoni yakho yolusu iyaphucuka kwaye iba ngakumbi nangakumbi. Ukongeza, iodine kunye neypyptophan equlathwe kwi-peptide inokwenza iinwele zakho zibemnyama, ngaloo ndlela zintle ngakumbi.
Ukhuselo lomzimba olungcono
Impilo yamajoni akho omzimba ibalulekile kwimpilo yakho kuba yiyo ekhusela umzimba wakho kusulelo kunye nezifo ezahlukeneyo. I-Zinc iphakathi kwezinto eziphambili ekufuneka amajoni omzimba wakho omelele kwaye asebenze kakuhle ekusebenzeni kwawo.
Ngethamsanqa, i-oyster peptide ibonelela umzimba wakho ngenani elifanelekileyo le-zinc ekufuneka inkqubo yomzimba yokuzikhusela iqhubeke kwaye ibeke iintsholongwane eziyingozi kunye neebacteria e-bay. Ukongeza, i-peptide ivuselela ukuveliswa kwe-thymulin yi-thymus gland. Ukuphuculwa kwemveliso ye-thymulin kukhokelela ekungqinelweni kwe-T-cell kunye ne-T4 ye-cell Helper, ebangela ukuba amajoni omzimba omelele.
Ezinye zezifo kunye neemeko zempilo onokuziphepha ngokuthatha i-oyster peptide ziquka:
Isifo sehepatitis esingapheliyo
Ukuthintela ukonakaliso olukhululekileyo
IiOsterster ezikhutshiweyo, kubandakanya iipeptides, ziqukethe ii-antioxidants ezikhusela iiseli zomzimba kunye nezicubu ekunyuseni kobudala uxinzelelo oluxhamlayo.
I-Oyster peptide ikwanayo i-amino acid, ngaphandle kokuphucula ukusebenza kwesibindi, enokuthintela ukuqokelelwa kwe-lactic acid. Ukongeza, i-acid inceda ekukhululekeni ngokomzimba nangokwengqondo. Oku kunceda umntu ukuba afumane amandla angakumbi kwaye abe nengqondo ecacileyo nenqabileyo emva kwemeko yoxinzelelo okanye ukugula.
Izibonelelo ze-oyster peptide endodeni
Amadoda anemicimbi yokusebenza ngokwesondo anokufumana inzuzo enkulu kwi-peptide ye-oyster. Oku kubandakanya amadoda ane-erectile dysfunction, ukungabi namandla, i-prostate okanye i-hypoplasia yesini, phakathi kwezinye izifo zesilisa kunye neemeko. I-Oyster peptide inokuphucula impilo yabo yesondo.
Amandla asemva kokuphuculwa kwempilo yezesondo amandla e-oyster peptide ngumxholo wayo we-zinc aphezulu, kuthathwa ukuba ioyster ngumthombo ocebe kakhulu we-zinc. Umxholo we-zinc kwi-oyster uphindwe kalishumi kunenyama ebomvu.
Ngokwezenzululwazi, i-zinc ibonakalisiwe ukukhulisa inqanaba le-testosterone yasimahla emntwini. Kwelinye icala, ukunqongophala kwe-zinc kungunobangela ophambili weengxaki zesini zesidala njengokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Kungenxa yokuba zingenayo i-zinc eyaneleyo yokuvelisa i-testosterone yokufaka kunye nokugcina abalinganiswa besibini kwindoda. Ubukhulu becala, amadoda anama-testosterone asezantsi amava aphantsi kwe-libido kunye nokusebenza ngokwesondo.
Ukongeza i-zinc, isiciko seembatyisi sikwanayo neevitamin D ezininzi, esinye isondlo esikwanceda umzimba wendoda ukuba uvelise i-testosterone engaphezulu. Ikwaphucula amandla emisipha kunye nobume bayo.
Ngaphandle koko, i-oyster peptide inobutyebi kwi-arginine, ukulandelela izinto kunye ne-selenium, zonke ezi zidlala indima ebalulekileyo kwimveliso yesidoda. Ngenxa yoko, umntu osebenzisa le mveliso yama-oyster amava aphuculwe ukuchuma.
Ke, xa indoda ithatha i-oyster peptide, I-testosterone yakhe kunye nemilinganiselo yokuvelisa isidoda inyuka, ngaloo ndlela ephucula impilo yakhe yesondo. Ngenxa yamandla omzimba ngokubanzi kunye nokunyuka kwama test testones, le ndoda iyakwazi ukuba ne-libido ekhawulezayo ngakumbi. Kwakhona, unokugcina i-erection ixesha elide.
Ngaphandle kokungasebenzi kakuhle ngokwesondo kunye nokungabinamandla, ikwaluncedo olusebenzayo lweemeko zamadoda ezinjenge-prostate eyandisiweyo kunye ne-hypoplasia yesini. Kungenxa yoko le nto ukukhutshwa kweembatyisi, ingakumbi i-oyster peptide, kuye kwasetyenziswa kakhulu phakathi kwamakhulu eminyaka-ekukhuthazeni impilo yamadoda ngokwesini.
Iziphumo zedosi enye ye-oyster peptide yedosi inokuhlala iintsuku ezisixhenxe ukuya kwezilishumi. Oku kuthetha ukuba indoda ayifanelanga kuthatha isongezelelo mihla le ukuze izuze kwisibonelelo sayo sokuphucula isini. Malunga neeyure ezili-12 emva kokuthatha isongezelelo, indoda iqala ukuziva inamandla kunye nomnqweno wokuba neentlobano zesini ngaphakathi.
Izibonelelo ze-oyster peptide kwabasetyhini
Izibonelelo zethu eziphambili ze-oyster peptide kukuphuculwa komzimba ngokubanzi. Kananjalo, xa umfazi ohlangabezana ne-antepartum okanye ubuthathaka basemva kwexesha ethatha esi songezelelo, uziva esomelele.
Ukongeza, njengamadoda, abasetyhini nabo bafumana impilo engcono yesondo emva kokuthatha i-oyster peptide. Umzimba womfazi ukhupha i-testosterones kodwa kwii-ovari.
Nangona kunjalo, abafazi be-menopausal abaqhelekileyo bahlile amanqanaba e-hormone, kwaye ngenxa yoko, bafumana ukoma okuncinci kwe-libido kunye nokuqina komfazi.
Ngethamsanqa, ukubonelelwa okongeziweyo kwe-zinc yi-oyster peptide kukonyusa inqanaba le-testosterone yowesifazane. Isiphumo soku kukunyuka kwesondo kunye nokungcono 'okucocekileyo' kwilungu lobufazi. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukonwabela ukubabelana ngesondo ngcono.
Zeziphi izibonelelo ze-Oyster Peptide xa uthelekiswa nezinye iimveliso zokuphucula zesini?
Ngokungafaniyo uninzi ukuphucula ngokwesondo Iimveliso, i-oyster peptide ayinaziphumo ziyindalo kuba konke-kuyindalo. Ngaphandle koko, umntu akunyanzelekanga ukuba ayithathe yonke imihla, njengoko kunjalo nangezinye iimveliso zokuphucula zesini. Iziphumo zedosi enye ye-oyster peptide inokuhlala kangangeentsuku ezisixhenxe ukuya kwezilishumi.
Inkqubo yokuSusa i-Oyster Peptide
Nanga amanyathelo anokulandelwa ukukhupha i-oyster peptide kwinyama ye-oyster.
Inyathelo lokuqala: Ukunyanga inyama nge-calcium yetyiwa
Inyama ye oyster ingumhlaba kunye netyuwa kunye namanzi. Oku kubangela ukuthoba inyama yeembatyisi. Eli nyathelo lijolise ekusebenzeni nasekukhupheleni ii-enzymes ezifumaneka kwi-oysters. Ngenxa yoko, amalungiselelo e-enzymatic abandakanyeka kwi-enzymatic hydrolysis ezayo ancitshisiwe.
Inyathelo 2: I-enzymatic hydrolysis
I-oyster inyama slurry eveliswe kwinqanaba lokuqala ifakwa kwi-enzymatic hydrolysis. Oku kufezekiswa ngokunyusa isaladi ukuya kwi-35 ° C ukuya kwi-45 ° C malunga neyure enye okanye ezimbini. Emva koko, i-enzyme engathathi hlangothi okanye iprotease ye-alkaline yongezwa kwi-slurry. Iqondo lobushushu lihlengahlengise malunga nama-50 ukuya kuma-60 ° C ukuze i-hydrolysis iqhubeke kwiiyure ezintlanu ukuya kwezisibhozo ezilandelayo.
Emva koko, i-pH ilungelelaniswa ne-5.0 ukuya ku-5.5, iprotease yencasa yongezwa emva koko i-enzymatic hydrolysis ivunyelwe ukuba iqhubeke ezinye iiyure ezimbini ukuya kwezintathu. Emva koko, i-supernatant enesiphumo iyenziwa nge-centrifuged yokufumana i-oyster engalunganga.
Inyathelo 3: Ukucoca ngokutsha kunye nokucoca
Ikharbon ekhulayo yongezwa kulwelo olungwevu lwe oyster olufunyenwe kwinqanaba lesibini. Umxube uvuselwa kumaqondo obushushu asusela kwi-45 ° C ukuya kwi-55 ° C kangangemizuzu engama-30 ukuya kwengama-60. Emva koko, ihonjululwe kwaye ihlungiwe nge-ceramic membrane. Ukucocwa kwesiphumo yinto ekubhekiswa kuyo njengesisombululo esicociweyo seoyster peptide.
Inyathelo 4: Ukugxila kunyeokomisa ukutshiza
Isisombululo se-oyster peptide esicociweyo sigxunyekwe ukuya kuma kwi-35% imixholo eqinileyo ngakwicala lekhonsathi. Emva koko siyomiswa ukutshiza ukuze kuveliswe i-peptide eqinileyo ye-oyster enambitheka kamnandi kwaye ingenalo nephunga elimnandi lokuloba.
Ungayithatha njani i-Oyster peptide powder? Idosi ye-oyster peptide?
Unokhetho ezimbini onokuthi uzithathe oyster peptide powder. Eyokuqala kukuyixhokonxa kwibhotile enomthamo ofanelekileyo wamanzi nokusela ukudityaniswa. Ngenye indlela, unokuyithatha eyomileyo kwaye emva koko uphuze amanzi athile ukuze utsibe esiswini sakho.
Akukho silinganiselo sichanekileyo lweepoyidi ze-oyster bioactive. Nangona kunjalo, umyinge ophakathi abanye oogqirha bancomela ngu-500 mg, othatyathwa ukuya kathathu ngosuku. Nangona kunjalo, kuba le yinto eyongeziweyo kwaye ekhuselekileyo yokutya eyongezelelekileyo, unokuyihlenga i-dosage phezulu okanye ezantsi, ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Oyster Peptide Side Iziphumo
Akukho ziphumo zingqinayo zesayensi ezibonakalayo ze-oyster peptide okanye i-oyster peptide ekhutshwayo. Oku kungenxa yokuba imveliso yendalo iyindalo ngokupheleleyo, ngaphandle kokungezizo izinto eziyingozi zokwengeza okanye izithako.
Nangona kunjalo, abantu abanokutya okuvela elwandle banokufumana iingxaki ezithile zempilo emva kokusebenzisa ioyster. Ke ngoko, umntu onesifo sokutya kwaselwandle kufuneka angazithobi iimveliso zeembatyisi, kubandakanya ipeptide.
Kwakhona, abantu abaneengxaki zempilo esele zikho bacetyiswa ukuba bathethe neengcali zabo zezempilo ngaphambi kokuqala ukuthatha iimveliso zeembatyisi. Oku kuyabanceda baphephe iimpembelelo ezinokubakho kunxibelelwano phakathi kokukhupha ioyster kunye namanye amachiza abanokuba bawasela.
Ngaphandle koko, ezinye iimeko zempilo ezinokuphuma zinokuba zibi ngakumbi ngokufumaneka kwe-zinc emzimbeni.
Isicelo se-Oyster Peptide Powder
Ngenxa yesiphumo sayo se-pharmacological, i-oyster peptide powder esetyenziswe kunyango lwezempilo. Umzekelo, ngenxa yedatha ebalulekileyo yeklinikhi eqinisekisa amandla e-oysters ukungqina i-serum yendoda, amadoda amaninzi aneengxaki zempilo yezesondo asebenzisa imveliso.
Ukongeza, i-powder yendalo isetyenziselwa ukulawulwa kwe-lipids yegazi kunye nokuthintela ukuhlanganiswa kweplatelet. Kucetyiswa nakubantu abaneempawu ze-hyperglycemia, amajoni omzimba aphantsi okanye imetabolism embi njengoko iphucula imeko yezempilo.
Abantu abanomhlaza banokuthatha nomgubo wolawulo olungcono lwesi sifo. Imveliso ye-oyster inokuthintela iiseli zomhlaza ukuba zingasasazeki. Umgubo unokusetyenziselwa ukuphilisa amanxeba kunye nokuphuculwa kwempembelelo yamandla e-systolic.
Olunye usetyenziso lwe-oyster peptide powder lubandakanya:
Inzuzo yokuchasene noxinzelelo
Njengesixhobo sokwandisa i-gland
Ngapha koko, ungasebenzisa oyster peptide powder njengesongezo sokutya. Inambitha elungileyo kwaye ayivumba 'yentlanzi' njengezinye iimveliso zolwandle zaselwandle. Ngaphandle koko, zizityebi izakha mzimba ekufuneka umzimba wakho ube sempilweni. Ngenxa yoko, inokuba kukuphembelela kakuhle kwizidlo zakho eziqhelekileyo.
Ii-oyster peptides, izicatshulwa zeoyster, zikhuselekile kakhulu ezinokusetyenziselwa izibonelelo ezahlukeneyo zempilo. Enye yezibonelelo kukuphuculwa kwemisebenzi yamadoda. Ezi peptides zinokunyusa i-libido kwindoda ene-sex sex drive kunye nokubala kwesidoda kumadoda aneengxaki zokuzala. Abasetyhini be-menopausal abahlangabezana nesondo eliphantsi lokuhamba ngesondo kunye nokomisa kwelungu lobufazi nako kunokuxhamla kakhulu kukukhupha i-oyster peptide.
Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., & Zeng, M. (2013). Ukucocwa kunye nokubonakaliswa kwe-peptide ebopha i-zinc ukusuka kwiprotheni ye-hydrolyzate ye-oyster. Umbhalo weeNtsebenzo zokutya, 5(2), 689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Iziphumo ezikhuselayo ze-peptide ye-antioxidative ehlanjululwe kwi-ggesrointestinal digests ye-oyster, i-Crassostrea gigas ngokuchasene nomonakalo omkhulu we-DNA. Itekhnoloji ye-bioresource, 99(9), 3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., & Balasubramanian, T. (2014). Umsebenzi we-antioxidant kunye nefuthe le-anticancer ye-peptide ye-bioactive evela kwi-enzymatic hydrolyzate ye-oyster (Saccostrea cucullata). I-Biomedicine kunye neSondlo esithintelayo, 4(3), 343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). Isicelo selungelo lokushicilela laseMelika Nombolo 15 / 542,743.
UZeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). I-peptide esebenzayo ye-antiviral evela kwi-oyster. Ijenali yaseTshayina ye-Oceanology kunye ne-Limnology, 26(3), 307-312.